Yenza ibhokisi yeenqwelo zakho zeNintendo Shintsha ezimile njengePokéball | Iindaba zeGajethi
Oo ezo ntshintshi zincinci zeNintendo Shintsha! Kuthethwe kangakanani malunga nabo ... ukuba ukuba bangcamle ngokwaneleyo (impumelelo enkulu kwicala leNintendo ukuthintela abantwana ukuba bangazityi), ukuba ziluncedo kwaye ziyamelana ... Inyani yile yokuba iNintendo isabambelele kwinkqubo yeekhathriji, nangona ngeli xesha zingaphezulu kwekhadi le-SD kunayo nayiphi na enye into. Oku kunezibonelelo, kwaye oko kukuthi kulula kakhulu ukuziqokelela kunye nokuzithutha.
Oko kufanelekile ukuba yayiyingcinga yomsebenzisi okrelekrele owaye waya kusebenza ukuyila Le Pokéball intle ekwaziyo ukugcina zonke iicartridge zakho zeNintendo Shintsha, ungazithutha kwaye uzikhusele kuyo. Masiqwalasele ngokuthe kratya kule nto intle kangaka.
Kwakungumsebenzisi we-YouTube ogama lakhe Ukuprinta kweKickass 3D lowo ubeka umshicileli wakho we-3D ukuba asebenze ukusinika ngaphandle kwesiphumo esimnandi kangaka. Ukunyaniseka, kufuneka sihlale sikhumbula ukuba sisebenza nemveliso eyenziweyo phantse ngendlela yobugcisa, ke kunzima ukuba ufumane iziphumo onokuzilindela kwimveliso eveliswe ngobuninzi, kodwa nangona kunjalo uyilo ilawulwe ngokufanelekileyo. Uyile i-3D Pokéball ayigcwalisileyo kamva ngezinto ezinesiponji anokugcina kuzo iicartridge zakhe zeNintendo switch.
Yonke isiko kwaye yenziwe ngesandla, kodwa inyani kukuba iya kukuxabisa kakhulu ukwenza olu luyilo ukuba awunalo ulwazi kunye nezinto eziyimfuneko ukuze ulufeze. Kwangokunjalo, umsebenzisi ushiye zonke iifayile eziyimfuneko zokuprintwa kwe3D kwi LONTO, ukuba ufuna ukuthatha ithuba labo. Yinto elungileyo malunga nomhlaba omlingo wokuprinta i-3D, unokufumana iziphumo ezimnandi ezinje ngezi, kungoko ugcina ukuya kuthi ga kwiitroli zeNintendo switch kunye nokuzihambisa njengoko kufanelekile kuyo yonke inkosi yePokémon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Benza ibhokisi yeenqwelo zakho zeNintendo Shintsha imilo yePokéball